I-bungalow yesitsha sikashukela - I-Airbnb
I-bungalow yesitsha sikashukela
Gosier Abymes , Guadeloupe, i-Guadeloupe
Indlu encane ibungazwe ngu-Anair
U-Anair Ungumbungazi ovelele
I-All-wood bungalow, esendaweni ekahle ezindaweni eziphakeme ze-Pointe-à-Pitre marina, imizuzu eyi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza sasePointe-à-Pitre kanye nemizuzu eyi-10 ukusuka ogwini oluhle lwaseLa Datcha, eLe Gosier. Lala ulaliswe yizingoma zamaxoxo uzivumele uvuswe yizinyoni.
Ngakha i-bungalow yami endaweni yami. Uzimele endlini yami. Yakhiwe ngegumbi eliyinhloko elinesiphephetha-moya ubusuku bakho elinombhede ophindwe kabili we-queen-teen, igumbi lokugezela kanye nekhishi elingaphandle. Konke kwenziwe futhi kwafakwa isihlabathi yimina ngokuthokozisa kwami nakwakho!
Indawo yokuhlala yaseWest Indian, ejwayelekile yaseGrande-Terre. Kubekwe kahle kakhulu ukuvakashela eGuadeloupe.
Ngiyatholakala ukuze ngikwazise ngaphambi nangesikhathi sokuhlala kwakho ukuze ngikusize futhi ngikweluleke ekutholakaleni kwesiqhingi sethu esihle. Ngingathanda ukukhuluma nawe mayelana nezilwane, izitshalo, ukuhamba ...
UAnair Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Gosier Abymes namaphethelo